JW Usoro Ihe Omume Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ Ọgọst 29–Septemba 4, 2016
ABỤ ỌMA 110-118
“Gịnị Ka M Ga-eji Kwụọ Jehova Ụgwọ?”: (Nkeji 10)
Ọma 116:3, 4, 8—Jehova napụtara ọbụ abụ ahụ n’aka ọnwụ (w87 3/15 20 ¶5)
Ọma 116:12—Ọbụ abụ ahụ chọrọ igosi Jehova na obi dị ya ụtọ maka ihe o meere ya (w09 7/15 29 ¶4-5; w98 12/1 24 ¶3)
Ọma 116:13, 14, 17, 18—Ọbụ abụ ahụ kpebiri na ya ga na-eme ihe niile Jehova chọrọ ya n’aka (w10 4/15 27, igbe)
Ọma 110:4—Olee “iyi” amaokwu a na-ekwu gbasara ya? (w14 10/15 11 ¶15-17; w06 9/1 14 ¶1)
Ọma 116:15—E kwuwe okwu olili ozu, gịnị mere na e kwesịghị ikwu na amaokwu a na-ekwu gbasara onye ahụ nwụrụ anwụ? (w12 5/15 22 ¶2)
Ọgụgụ Baịbụl: (Nkeji 4 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) Ọma 110:1–111:10
Ozi Ụlọ n’Ụlọ: (Nkeji 2 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) ll 16. Gwa onye ahụ ihe unu ga-atụle n’oge ọzọ.
Nletaghachi: (Nkeji 4 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) ll 17. Gwakwa ya ihe unu ga-atụle n’oge ọzọ.
Ọmụmụ Baịbụl: (Nkeji 6 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) bhs isi nke 18 ¶17-19. Nyere onye ahụ aka ka ọ ghọta otú ọ ga-esi eme ihe e kwuru ebe ahụ.
Abụ nke 82
“Na-akụzi Eziokwu”: (Nkeji 7) Okwu ndị na-ege ntị ga-etinyetụ ọnụ.
“Ụlọ Nche Pụrụ Iche Anyị Ga-enye Ndị Mmadụ n’Ọnwa Septemba”: (Nkeji 8) Okwu ndị na-ege ntị ga-etinyetụ ọnụ. A ga-akpọnye vidio nke mbụ na-egosi otú anyị nwere ike isi nye mmadụ Ụlọ Nche na Septemba, a tụleekwa ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ dị na ya. Mee ka ikesa Ụlọ Nche a gụwa ụmụnna agụụ. Gbaakwa ha ume ka ha sụọ ụzọ inyeaka.
Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ: (Nkeji 30) ia isi nke 23 ¶1-14
Chetakwa na a ga-ebu ụzọ gee abụ ahụ tupu a bụọ ya.
Ihe Ndị Anyị Ga-amụ n’Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ n’Ọgọst 29–Septemba 4, 2016
mailto:?body=Ihe Ndị Anyị Ga-amụ n’Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ n’Ọgọst 29–Septemba 4, 2016%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D202016291%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ihe Ndị Anyị Ga-amụ n’Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ n’Ọgọst 29–Septemba 4, 2016